IINGCINGA ZEGUMBI LOKUHLAMBELA ELINCINCI (ILIZE, UKUGCINA KUNYE NOYILO LOYILO) - UYILO LWEGUMBI LOKUHLAMBELA
Eyona uyilo Lwegumbi Lokuhlambela Iingcinga zeGumbi lokuhlambela elincinci (Ilize, ukuGcina kunye noYilo loyilo)
Wamkelekile kwigalari yethu yeengcamango zangasese ezincinci. Ukuba nesakhiwo esincinci sokuhlambela kunokudala imiceli mngeni eyahlukileyo. Apha ngezantsi uyakufumana izimvo zoyilo zezinto ezingenamsebenzi zokuhlamba, iisinki, ukugcinwa kunye nokuhonjiswa ukwenza indawo oya kuyithanda kunye nosapho lwakho.
Igumbi lokuhlambela elimxinwa eliboniswe kumfanekiso ongentla linika imiphezulu yeetafile zemarble enendawo eyaneleyo yokubala, enkosi ngokuyinxenye ekusebenziseni igumbi lokuhlambela elitshonile. Igumbi lokuhlambela linombhobho omile okweqanda, kunye neempompo ezibekwe ngokucocekileyo eludongeni, kwaye ecaleni yindawo yeshawari ekwahlulwe ngokwahlulahlula iglasi. Ukusetyenziswa okukhulu kweglasi umz. isipili, iifestile ezinkulu kunye neeshawari ezivaliweyo ezidityaniswe ngombala okhanyayo ongwevu zenza le ndlwana yangasese imxinwa izive ikhudlwana.
Isithuba esilinganiselweyo sihlala siyindlela elungileyo yoyilo loyilo kunye neendawo zokuhlambela ezincinci azikho kuloo nto. Ezi ntlobo zeendawo zizisa eminye imiceli mngeni yoyilo enika indlela kwizisombululo ezintle zoyilo.
Xa kuyilwa ezi ntlobo zezithuba, kufuneka kuthathelwe ingqalelo enkulu ekucwangciseni indlela yokubeka nokucwangcisa izinto ezisegumbini. Nangona kungasoloko kuthethwa njalo ngamanye amalungu endlu, igumbi lokuhlambela ngokuqinisekileyo lelinye lamagumbi abaluleke kakhulu kuyo yonke indawo yokuhlala. Ngokuqinisekileyo yeyona ndawo yabucala ngaphakathi ekhaya kwaye apho abahlali bachitha ixesha labo rhoqo.
Iingcamango ezincinci zeNdlu yokuhlambela
Nanini na uya kujongana ukulungisa kwakhona igumbi lokuhlambela elincinci isithuba kunokuba ngumceli mngeni wokulingana yonke into ongathanda ukuyifumana. Ukufumana indawo yokuhlambela esebenza nendawo yakho kunokufuna ukubingelela ngezixhobo okanye ukunciphisa ubungakanani bamampunge akho okanye nokususa ibhafu. Apha ngezantsi kukho ezinye zeendlela ezilungileyo zokubeka igumbi lokuhlambela elincinci ukwandisa ukubonakala kwalo.
Cinga ngokuthe nkqo -Kuba udonga lokuthengiswa kwezindlu kunye nomhlaba lilinganiselwe ngesicwangciso esincinci somgangatho kubalulekile ukusebenzisa ngononophelo into onayo. Ukongeza ishelfu kunye nekhabhathi ngaphezulu kwendlu yangasese kungonga indawo. Ukugcinwa kweglasi kunokunceda indawo ibonakale inkulu kunokuba injalo. Iikhabhathi zamayeza kufuneka zitshitshiswe ukuba kunokwenzeka kwaye ziboniswe oko kunceda ukubonakalisa ukukhanya kunye nokugcina izinto zikhangeleka zivulekile.
Musa Ukungahoyi Emva Komnyango Ngasemva komnyango yindawo ehlala ihoywa apho umntu anokufaka khona imivalo yetawuli okanye amagwegwe engubo anokuvula indawo eludongeni.
Isinki ezincinci Isinki zokuhombisa zihlala zisetyenziswa kwigumbi lokuhlambela elincinci kuba zinceda igumbi libukeke likhulu. Nangona kunjalo, oku kuza ngendleko yendawo yokugcina. Ukuthintela oku unokukhetha udonga olunyusiweyo olulambathayo oluneziphumo ezilungileyo.
Susa ibhafu - Oku kunokuthathwa njengombane kubaninimzi abaninzi, ngaphandle kokususa ityhubhu kunokuba yindlela elula yokukunyusela isicwangciso sokuhlambela. kwabo bafuna ukugcina ityhubhu, unokucinga ngokuhamba nebhafu yeprofayile esezantsi enikezela ngemvakalelo evulekileyo ngakumbi yokuba yimodeli yesayizi epheleleyo.
Beka uMnyango weSilayidi esiTyibilikayo okanye uPocket Door Ngaphandle kokususa ibhafu ukufakwa kocango lwesilayidi esityibilikayo okanye ucango lwepokotho kunokuba lelinye lawona manyathelo okugcina indawo. Ngokutsho koqikelelo, ukushenxiswa komnyango ojingiweyo kunokukugcina ukuya kuthi ga kwi-9 yeenyawo zenyawo yomgangatho wendawo. Ukuba uthatha isigqibo ekufakweni kocango lwesilayidi esisilayidayo ungakuphepha ukuvula udonga lwakho kumnyango wepokotho onokukugcinela ixesha kunye nemali.
Ityhubhu engenasiseko -Ungasivula ngokwenyani isithuba sakho sokuhlambela ngokulahla ikhethini yeshawa kwishower / tub combo kwaye uhambe nepaneli yeglasi engenacala. Ukwenza njalo kunokwenza ukuba igumbi lokuhlambela libukeke 1/3 likhulu kwaye likususe la makhethini amabi okuhlamba kube kanye.
Iishawari ezingenakurhoxiswa -Imvula engenakuthintelwa ithandwa kakhulu eYurophu apho indawo ikwipremiyamu. Ishawa engenasiphelo isusa umjikelo ojikeleze ishawa kwaye endaweni yoko i-flooring iqhuba ngqo kwigumbi. Ezi ntlobo zoyilo zinokubonakala zintle xa zidityaniswe neethayile, ikhonkrithi okanye imigangatho yamatye.
Yongeza izibuko -Ukongeza izibuko kunokwandisa ngokwenene ukuziva kwegumbi. Iipili zinceda ukukhanyisa izinto ngokubonisa ukukhanya kwaye zinokukunceda ufumane okuninzi kwizinto zakho zokukhanya ezikhoyo.
Izindlu zangasese ezixhonywe eludongeni -Izindlu zangasese ezixhonywe eludongeni zinezitanki ezakhelweyo eludongeni ezenza iprofayili encinci egcina zombini indawo yomlenze kunye nomgangatho.
Sebenzisa udonga oluvakalayo - Udonga olusisigxina usebenzisa iithayile okanye enye into inokwenza umdla obonakalayo kwaye ikuvumele ukuba ungenise umbala ngaphandle kokuba ungoyiki. Iindonga ze-Accent zinokuhamba njengomtya othe tyaba emgangathweni kwaye zinyuse iindonga ukuze zitsale iliso phezulu ukuze zenze inkohliso yendawo enkulu.
Ukubona ezi zimvo ekhayeni lakho zama enye yezindululo zethu Isoftware yokulungisa indawo yangasese iinkqubo. Ezi nkqubo zivumela umntu ukuba azame ukongeza izinto ezahlukeneyo kuyilo ukunceda ukubona ngendlela ezakubonakala ngayo.
Iingcamango ezincinci zokuhlambela ezisebenzisa umxholo oqaqambileyo wombala lukhetho olukhulu, njengoko ukukhanya okukhanyayo kubonakalisa ukukhanya kwaye kunceda ukubonakala kwendawo enkulu. Ukuqhubekeka ukunceda ukongeza ukukhanya okubonakalisiweyo ngumthi omkhulu omhlophe owenziwe ngesipili oxhonywe ngaphezulu kwendawo yokuhlambela phakathi kwesibini sendlela yeklasikhi yodonga lwesilivere. Igumbi linemifanekiso emhlophe eyenziwe ngomthi, ephelisa udonga oluhlaza okwesibhakabhaka. Indawo yangasese yale ndawo yokuhlambela incinci yenziwa ngokubhekisele kwindawo yokugcina, kunye neshelu ephezulu yokuxhoma, itawuli erhawulini esecaleni, kunye nesiphatho sesicwili kunye nebhasikiti ecaleni kwayo. Oku kushiya ikhawuntara yelavatory ingenayo i-clutter, ine-chrome counter counter yayo efakwe kwiimpompo kunye nesinki emhlophe engenamida.
Iingcamango zokuhlobisa izindlu zangasese ezincinci
Nazi izinto ekufuneka uzithathele ingqalelo xa uhombisa igumbi lokuhlambela elincinci okanye uhlaziya indawo encinci yokuhlambela.
Isilumko Ukugcina - Izithuba ezincinci zinotyekelo olubi lokuxinana ngokukhawuleza okukhulu. Umgangatho omncinci wendawo kuthetha ukuba akukho ndawo incinci yokugcinwa kwezinto ezigcinwe kwigumbi lokuhlambela njengemveliso yezempilo, iitawuli kunye neengubo, kunye nempahla ethintela iimpahla. Kananjalo, zama ukufumana iindlela zokuyila zokugcina zonke ezi zinto. Iishelufa zokudada kunye nodonga yindlela eqhelekileyo yokukhupha oku. Unokuzama ukubandakanya indawo yokugcina kwindawo yokugcina izinto kwigumbi lokuhlambela, njengokusebenzisa isikeyiti sokuntywila, iikreyiti ezixhonyiweyo kunye neetreyi, kunye nemigqomo yokugcina enokugcinwa.
Okungaphantsi kuninzi - Ubuncinci bubumnyama obutsha kule mihla. Ekuphenduleni umba weendawo zokuhlambela ezincinci ezixineneyo, umntu kufuneka acinge nzulu xa kufuneka eyeke malunga nokongeza izinto zoyilo kwigumbi. Nangona ubuqu kunye nobuchule bokuyila buhlala bukhuthaza kuyilo lwangaphakathi, abantu abaninzi kufuneka bazi ukuba kuninzi kangakanani. Ngezithuba ezincinci, oku kuyinyani ngakumbi, ke qiniseka ukuba uyazi xa into iluncedo okanye ingekho kwigumbi lokuhlambela, kwaye xa kufanelekile ukuhambisa izinto ezincinci zokuhombisa kwenye indawo.
Amacandelo eAccent - Oko akutsho ukuba kufuneka ususe zonke izitayela zesitayela kwindawo yokuhlambela; Isitshixo kuyilo olulungileyo kukusetyenziswa kweziqwenga ezinesibindi. Nangona kwisithuba esincinci, umntu kufuneka alumke angaxinanisi indawo, iziqwenga ogqiba ekubeni uzigcine kufuneka zenze igalelo kwindawo jikelele. Oku kunokuba yimizobo, imifanekiso eqingqiweyo kunye nodonga lwesandi.
Cinga ngombala - Soloko ucwangcisa imibala yemibala oyithandayo kwangaphambili. Zama ukubona ukuba zeziphi iintlobo zokudityaniswa kombala ezikubetha kakhulu kwaye ujonge ukudibanisa iphalethi ekhanyisela indawo encinci yokuhlambela. Enye ingcebiso iya kuba kukusebenzisa imibala engathathi hlangothi ukukhuthaza ukuzola nokucoceka. Iithoni ezingathath'icala kunye neephalethi ezisetyenziswe njengesiseko sombala wegumbi lokuhlambela kukonyusa ukuhleleka kunye nesitayile sendawo.
Zizinto ezincinci - Ngokuyila, ezona nkcukacha zincinci zenza umahluko kwihlabathi. Emva kokujonga iziqwengana ezinkulu ze-aksenti, umbala wombala opheleleyo wegumbi, kunye nokubekwa kwayo yonke into esithubeni, zama ukucinga ngeenkcukacha ezenza igumbi lokuhlambela likhanye ngokwenene. Yenza ukhetho ngononophelo xa kufikwa kuhlobo lweethayile ezisetyenzisiweyo, izixhobo zokuhlambela ezisetyenzisiweyo ezinje ngeerowuli kunye neehuku, kunye nezixhobo ezinje ngamaqhina omnyango kunye nohlobo lwezinto zangasese oza kuzisebenzisa.
Le ndlu yokuhlambela inezinto ezimbini zokuphakama, kunye nenxalenye ephezulu efakwe kwisinki esirhabaxa, kwaye esezantsi iyeyona iseti yeedrowa. Isipili esingenamsebenzi sidityaniswe nekhabhathi yeyeza kwaye sibekwe ngaphezulu kwesinki, kwaye sikhanyiswe yitrio yesitayile esidala sodonga. Kwicala, ishelufu ende evulekileyo yindawo efanelekileyo yokufumana ucoceko kunye nokuhombisa.
Ngokususa isakhelo esiqhelekileyo kunye nokuhamba ngesitayile sokuhlambela esingenakunqandwa ungaqhuba i-flooring ngqo kwisitya uyinike inkangeleko enkulu. Ishawa engenamanzi ikhangeleka inomtsalane, ngakumbi xa isetyenziswa ngethayile, ikhonkrithi, okanye imigangatho yamatye endalo.
Oku uyilo oluncinci lwangoku lokuhlambela igcina izinto ziqaqambile ngeendonga zayo ezimhlophe, amampunge adadayo kunye neenkuni zijonga i-porcelain tile flooring. Iipili ezimbini ezinkulu zikwanceda ukubonisa ukukhanya kunye nokuqaqambisa indawo.
Le ndlu yokuhlambela inophahla oluthambeke, kunye nelona lide lifakwe ibhafu kunye nendawo yokuhlamba. Ibhafu inezinto ezahlukeneyo zentloko yeshawari, ngelixa indawo esezantsi, ethambekekileyo inxitywe kwisiphelo somthi ofudumeleyo. Ukuba nekhabhathi kunye namashalofu elingana nethambeka, kunye nokufaka udonga oluphezulu kwisiphelo esifanayo somthi sisincoko esikhulu kwiindonga ezingwevu, kwaye ikwanika igumbi lokuhlambela liziva lipholile. Isinki esincinci esimile okwe-isitya sihlala phezulu kwetheyibhile yokuthambisa kunye nempompo ebekwe eludongeni, ikhulula indawo ethe kratya.
Le ndlu yangasese inezinto ezimbini ezibini zokubala. I-countertop nganye ifakwe kwi-sink engenasiphelo, oku kuthetha ukuba indawo ekhoyo yokubala iyafumaneka. Ukongeza, iikhabhathi ezingaphantsi komhlaba kwaye zinkulu kwaye zinkulu zokugcina, kwaye incediswa yishelufu ende evulekileyo phakathi kwezindlu zangasese ezimbini ezibonelela ngokugcina okungaphezulu kunye nendawo yokuhombisa. Ngaphezulu kwetafile nganye, izipili ezinkulu zazifakwe ngokhuni olumnyama, nto leyo inika umbono wento enkulu.
Sebenzisa indawo emxinwa, le ndawo yokuphaka iluncedo ithatha ithuba kwisilingi ephezulu kwigumbi lokuhlambela. Isibuko esingenamsebenzi side, sibaleka ukusuka phezulu kwi-countertop's backsplash yonke indlela eya kwi-cornice edibanisa udonga ukuya eluphahleni. Iishelufa ezivulekileyo ezisecaleni zibonisa oku kuphakama, kunye necasework eyenziwe ngombala omdaka obalekayo ukusuka kwitafile yonke indlela eya kwi-cornice yesilingi. Isinki ye-curvilinear isisiqingatha esifihliweyo kwi-countertop kwaye ikhanyiswe zizibini zodonga lwesitayile esenziwe ngapha nangapha kwesipili, ezixhonywe kudonga lwasemva komfanekiso.
Le ndlu yokuhlambela encinci ibeka uqoqosho ngokubeka zonke izinto kwicala elinye lodonga, iqinisekisa indlela engenazithintelo yenziwe kwelinye icala. Ukongeza koku, itawuli yokubeka itawuli inyuselwe kubude obucacileyo ngaphezulu kwendlu yangasese, iqinisekisa ukuba kulula xa ufikelela kwishower. Igumbi lokuhlambela linendawo yokuntywila engenamanzi phantsi kwetheyibhile emhlophe ye-quartz, kunye nempompo enyusiweyo, evumela indawo ethe kratya yokubala. Ngasentla kwesinki kukho ipeyinti emhlophe eyenziwe ngomthi enesipili esikhanyiswe zizibini zodonga lwangoku.
Le ndlu yokuhlambela isebenzisa ukungamampunge okwenziweyo okwangoku kunye nokugqitywa kweemarble zokongeza isitayile kunye nokusebenza kwindawo ngaphandle kwenyawo enkulu.
I-countertop ye-lavatory countertop ibonisa i-marble top kunye nepeyinti eluhlaza okomhlaza olwandle oluphantsi kwee-drawers kunye neekhabhinethi ezine-chrome ezigqityiweyo ezihambelana neempompo. Iindonga kwigumbi lokuhlambela zibonisa iipaneli ezimhlophe ezipeyintiweyo zokufota eziza malunga nesibini kwisithathu sodonga. Umphezulu wendawo yokuhlambela unezipili ezibekiweyo ezifanayo ezinombala omhlophe onembombo, kwaye ngaphezulu koku, iwindow emfutshane ethe tyaba yokuqhafaza ihamba ubude bekhawuntara yokuvasa, izisa umoya nokukhanya. Kwicala, ishelufu yohlobo lwamanqanaba ilula kodwa inendawo enkulu yokugcina.
Nokuba ulawula ukufaka iJacuzzi kule ndawo yokuhlambela incinci ngasecaleni kwendawo yokuhlambela eglasi, imarble yeCalacatta esetyenzisiweyo phantsi kunye neendonga inika lo mlinganiswa wokuhlambela, ugxininiswa ngakumbi sisipili esipheleleyo eseludongeni. Ukongeza, ukusebenzisa iingcango ezimbini zepokotho ekungeneni kuqinisekisa ukuba iingcango ziyanyamalala ezindongeni ngokucocekileyo, kuthintela iingxaki zesithuba ezibangelwa kukujikeleza komnyango.
Le ndlu yokuhlambela encinci iza neendonga ezimhlophe kunye nepeyinti emhlophe yepeyinti. Iithayile zayo zikwibhayile emhlophe enemibala emhlophe. Sebenzisa i-shades ezikhanyayo zongeza ubunzulu kwisithuba, zidityaniswe nezinye izinto zokonga indawo. Ngaphezulu kwesinki yokonga isithuba, ikhabhathi yamayeza enesipili kwiphaneli yayo ephakanyisiweyo iyagqitywa eludongeni. Ngaphandle kwale, indlu yangasese elula inenye into elapha evulekileyo eshalofini kwiimfuno zangasese.
Ukusetyenziswa kobuchule kwishelufa kungongeza umlinganiswa kuyilo lwendawo yokuhlambela. I-trio yeeshelfu ezinde ezivulekileyo zibekwe ngokucocekileyo ecaleni kwesinki esimhlophe esimhlophe, sinendawo eyaneleyo ezantsi kwiibhasikithi ezimbini ezimnyama zokuhlamba iimpahla, kusetyenziswa i-laminate yeplanga kwimigangatho yayo, la magumbi okuhlambela akhanyisa iindonga ezingwevu kunye namashalofu amhlophe amhlophe kunye neekhi zilungile indlela yokuqaqambisa igumbi lokuhlambela elincinci. Sebenzisa isinki sokuhambisa isiseko esikhulu sokugcina indawo esikhangeleka sicocekile kwaye simema iindwendwe ngeendleko zokufumana indawo yokugcina amanzi.
Igumbi lokuhlambela elingwevu likhombisa uhlobo lokuntywila olunesiseko esibhityileyo kunye nesitya esomeleleyo. Isitya sokuhlambela sinogada obusecaleni ukwenzela ukuba izinto ezincinci zokuhlambela zibekwe kwisitya. Ngaphezulu koku, ikhabhathi yeyeza ifakwa eludongeni kwaye yenziwe nge-cornice emhlophe yepeyinti. Iphaneli efihliweyo kumnyango wekhabhathi inesipili, kwaye ilayishwe ngababini bezitayile zodonga zesitayile esihambelana nolungelelwaniso oluphambili lwesilingi kwigumbi lokuhlambela. Kwicala, iwindow encinci enefreyimu egxile eludongeni apho inyuswe indlu yangasese esezantsi. Ngaphezulu kwendlu yangasese, kufakelwe uthango lokudada ngaphezulu kwendawo yokuhombisa.
Le ndlu yokuhlambela incinci inemilo engaqhelekanga ye-L, kwaye olu lwakhiwo lusebenzisa ngokupheleleyo ubume obungaqhelekanga. Kwelinye icala, isinki esimhlophe esimhlophe kunye neempompo ezigqityiweyo ze-chrome sifakwe kwi-cove, nesipili se-oval ngaphezulu kwaso kwaye sikhanyiswe yi-chrome egqityiweyo. Kwelinye i-cove, indlu yangasese ifakwe iishelufa ezimbini ezixhonywe ngaphezulu kwayo ukuze kugcinwe kunye nendawo yokuhombisa.
indlela yokuhlawula ilokhwe
Ukugqitywa komthi omnyama wekhabhathi engaphantsi kweekhabhathi kuhamba kakuhle ngetafile emhlophe emhlophe emayenziwe nge-backsplash, kunye neendonga ezikhanyayo ezingwevu kunye neethayile zomgangatho omhlophe. Eyona nto kugxilwe kuyo kwigumbi, ikhawuntari yelavatory inesitya esinexande esixande kunye ne-gooseneck chrome egqibile iimpompo. Ngaphezulu koku, isipili esikhulu esithe tyaba esineqokobhe elibanzi lesakhiwo sombane sikhanyisiwe yisitayile seContemporary chrome esigqibeleleyo sodonga. Kwicala, indlu yangasese ikhanyisiwe ngokukhanya okungena kwiifestile eziyiliweyo. Isitulo esongezelelweyo sabekwa ecaleni kwendawo yokuhlambela yokugcina itawuli.
Le ndawo yokuhlambela i-Master inendawo engqinelanayo, kunye neesinki zokuntywila ezityibilikayo zine-tap ye-chrome, kunye nesipili esimhlophe esimhlophe somthi esibekwe ngaphezulu. Kwicala ngalinye ngalinye kukho itawuli yokubeka itawuli, isipili esolulekayo kunye neshelufu yokuxhoma, ifakwe kwiiplanga ezimhlophe ezimileyo nkqo eludongeni. Amampunge amnye akhanyiswe zizikhuselo zodonga lwesibini, kwaye zahlulwe yibhokisi yoqalo yeedrowa. Umgangatho usebenzisa iiplanga ezinkulu, ezenziwe ngomthi kumthi omnyama ogqityiweyo.
Eli gumbi lincinci lomgubo libonisa ukukhanya kweendonga ezingwevu, izinto ezimhlophe kunye nezinto ezilungiselelwe kunye nomgangatho ocebileyo womthi. Isitya sokuhlambela sisiko elinyuswe kwi-countertop yesitayile seediliya eluhlaza eluhlaza. Itheyibhile ecingelwayo inemilenze egobileyo, iidrowa ezimbini kunye neshelufu yokugcina engaphantsi. Iimpompo zixhonywe eludongeni, kunye nesipili esimile okweentyatyambo ngaphezulu. Kwicala, ishelfu evulekileyo evulekileyo enamagwegwe inyuswe ngaphezu kwendlu yangasese.
Le ndlu yokuhlambela encinci ineglasi evaliweyo efakwe kwikona enye, isetwe ngemabhile egqityiweyo. Indawo yokuhlambela inebhentshi, nokuba yeyokuhlala okanye yokugcina, kunye nodonga olungapheliyo. Indlu yangasese ijikelezwe ngumsebenzi weplanga omhlophe opeyintiweyo, iidrowa ezincinci zigxunyekwe ngokuthe nkqo, kunye namashalofu avulekileyo ngaphezulu ngentla yokuhombisa. Isibuko setyhula sijinga phezu kwento engento, eyenziwe yitafile yemarble kunye neekhabhathi zomthi ezimnyama. Amampunge akhanyiswa yinto encinci ukukhanyisa ixesha .
Uninzi lweengcamango ezincinci zokuhlambela zisebenzisa isitayile sokuntywila ngenxa yoyilo lwazo olusezantsi. Isinki yokuntywila inesiseko sentsimbi esingenasici esinerakhi yetawuli kunye neziphatho zethishu, kunye nebasin enkulu eneempompo zechrome. Kwicala, umgangatho ukuya kwisilingi owakhiwe ngomthi omdaka ngombala uvumela iishelfu ezininzi ezivulekileyo, ezizaliswe ziibhaskithi ze-rattan zokugcina ngcono. Igumbi lokuhlambela liqukethe iithayile zangaphantsi zodidi lweCalacatta ezantsi kwesiqingatha sodonga. udonga oluphezulu olucwecwe mhlophe.
Le ndlu yokuhlambela inezinto ezininzi zakudala, ezinje nge-hexagonal mosaic flooring, iithayile zemarble zesikwere sendawo yokuhlambela, kunye nomfanekiso omhlophe ogqunywe ngepeyinti phezu kweendonga ezipeyinti ezikhanyayo. Ibhafu yokuhlamba icocwe eludongeni olunye, kwaye idityaniswe nezinto zokuhlamba. Ikhethini leshawa elilula likhusela ngaphandle emanzini. Ngaphandle kukho udonga olulula olonyusiweyo olunendawo eyaneleyo kwisitya sayo semveliso ethile encinci. Ngaphezulu koku, ikhabhathi enkulu yamayeza ifakwa eludongeni kwaye inesipili kumnyango wekhabhathi yayo. Kwicala, indlu yangasese ibekwe ngezantsi kwefestile exhonywe kabini.
Le ndlu yokuhlambela inendawo yokulinganisa encinci kunye nesitya sohlobo lwesitya esibekwe ngaphezulu. Ngasentla sisipili setyhula esenziwe ngomthi omnyama kunye neetroniki zamatye obhedu weediliya. Ngaphantsi kwekhawuntari, ikhabhathi ibonelela ngendawo yokugcina, ukongeza kwikhabhathi yamayeza ephindwe kabini engena eludongeni ngaphezulu kwendlu yangasese. Kwicala, umnyango weglasi ongenasiphelo ukhokelela kwindawo yokuhlamba ene-niche yokugcina yeemveliso zebhafu.
Le ndlu yokuhlambela encinci inendawo yokuntywila elula kakhulu kunye nendlu yangasese, kodwa iyenzele ngokwendawo yokugcina kunye nezinto zayo zerattan. Emgangathweni, phakathi kwezinto ezimbini eziphambili, ibhokisi encinci, ephathekayo ye-rattan isetiwe, kwaye inokusetyenziselwa ukugcinwa. Ngaphezulu kwendlu yangasese, iileyili ezimbini zaxhonywa eludongeni, iibhasikithi ezincinci zixhonywe kuloliwe, kwaye zivulelekile ukufumana izinto eziyimfuneko zemihla ngemihla. Isibuko ngaphezulu kwesitya sikhulu kwaye sibonisa uhlobo lwerustic lwesakhelo.
Iithala ezintathu ezimile okwe-L ezixhonywe eludongeni ngumboniso omhle wezinto zokuhombisa kunye nokuhonjiswa konxweme. Ukugqitywa komthi omnyama osetyenziswa kule ndawo yokuhlambela kuhamba kakuhle kunye nodonga lokukhanya kweetal kunye nezinto ezimhlophe kunye nokulungiswa. Ngaphandle kwesiseko esibhityileyo, isitya ngokwaso sibanzi, sinamacala alindiweyo, sivumela indawo yokugcina. Isipili esincinci esincinci ngasentla senziwe ngesakhelo somthi esimnyama esi-3 esibonelela ngomda weemveliso ezincinci zokuzilungisa. Kwicala, indlu yangasese esezantsi inebhasikidi yokugcina iwicker ngaphezulu yokugcina iitawuli zokuhlamba okanye ezinye izixhobo.
Uninzi lweengcamango ezincinci zangasese zisebenzisa izibuko kunye neeshelfu zeglasi ukwenza inkohliso yendawo enkulu. Le ndlu yokuhlambela ineethoni ezingwevu kunye neendonga zayo ezingwevu kunye nomgangatho kunye neethayile zodonga, ezenziwe ngomthunzi ofudumeleyo. Isinki yokuhamba ngenyawo inkulu kodwa igcina indawo yomlenze, kwaye inezinto zayo ezinesetyhula. Isipili esikhulu se-oval sixhomekeke phezu kwayo, ngelixa sisecaleni; indlu yangasese ineshelufu yeeshelfu ezivaliweyo ezibekwe eludongeni. Indawo yokuhlambela nayo inkulu kodwa inezimpompo ezincinci, inyuswe kwicala elinye lodonga kwaye yahlulwe kwigumbi lokuhlambela kuyo yonke isahlulelo seglasi.
Le ndlu yokuhlambela encinci inezinto ezimnyama ezenziwe ngetayile kunye neendonga ezimhlophe. Indlu yangasese elula kunye neenyawo zokuntywila zigcina indawo eninzi ngokudityaniswa, kwaye isithuba esiphakathi kwabo sixinene ngengobozi yeebhasikiti ezinqabileyo zokugcina. Ezi ziyaphatheka, kwaye zinokuhanjiswa ziye kwiindawo ezahlukeneyo kwigumbi lokuhlambela njengoko kufuneka. Isibuko, ngaphezulu kwesinki, sibonisa uyilo olufana neebhasikiti ezinqabileyo.
Le ndawo yokuhlambela ixuba indawo yokuhlambela kunye nebhafu, idala indawo apho abasebenzisi banokwenza zombini, ngeempompo ezibekwe eludongeni lwangasemva kunye nebhafu efakwe kakuhle emgangathweni. Iindonga eshaweni zikwitayile engaphantsi komhlaba ehamba nethayile egxininisayo malunga neyesithathu kwisine yendlela enyukayo. Isilayidi esincinci seglasi sahlula le ndawo kwigumbi lokuhlambela, elibonisa impompo enkulu nenqabileyo kwisinki engenasiphelo, evumela indawo ethe kratya ngapha nangapha. Isibuko esikhulu esingenasiphako sibekwe ngaphezulu koku, phakathi kwezibane zesilivere zesitayile esiqhelekileyo. Iipili zikwabeka indawo yokuhombisa enqamlezileyo yeekhabhathi ezingaphantsi.
Ukugcina igumbi lokuhlambela elincinci
Eyakhelwe kwikhabhathi ebekwe ngaphezulu kwendlu yangasese inokwenza indawo yokugcina eyongezelelweyo kwindawo encinci. Iqukethe iindonga ezenziwe ngombala kunye nesitulo esicocekileyo esimhlophe esihamba ngakwiziko laso, le ndawo yokuhlambela isebenzisa umthi oshushu ofudumeleyo ukuze isebenze kwimeko yayo yokongeza umbala kule ndawo yokuhlambela Itafile yasetafile yokuhlambela inesinki encinci engenaziphetho kunye neempompo zethusi ezinobhedu, ivumela indawo ethe kratya. Ngaphezulu koku, isipili senziwe ngokugqitywa komthi ofudumeleyo njengeekhabhathi kwaye sikhanyiswe yitrio yeerustic sconces. Itanki yendlu yangasese iqulunqwe ngumsebenzi wokugqitywa komthi ofudumeleyo, kunye neshelufu enye evulekileyo yokuhombisa kunye nekhabhathi ejingayo yokugcina ivaliwe.
Enye yeendlela eziphambili zokwenza indawo yokugcina okanye yokuxhoma kwindawo yokuhlambela yishelufu yesitayile esisezantsi. Ngaphandle kokuba nezinto ezininzi zokubeka ishelfu kunye nokuxhoma, ukuyenza ibe yifenitshala enjongo-mbini, ileli yokuhlambela nayo iyaphatheka, okuthetha ukuba inokushukunyiswa ijikelezwe njengoko kubonakala kufanelekile kuxhomekeke kwiimfuno zomsebenzisi. Kule meko, ipeyinti emhlophe eyenziwe ngomthi yokuhlambela iladi ihamba kakuhle neendonga ezingwevu eziluhlaza.
Le ndlu yokuhlambela incinci yayipeyintwe yonke emhlophe, ikhaphukhaphu, imibala efanayo iya landa igumbi, kwaye isebenza apha ngokudibeneyo nesipili ngaphezulu kwesinki kunye nesipili esifakwe kwikhabhathi yeyeza ngaphezulu kwendlu yangasese. Sebenzisa uhlobo lokuntywila kumgxobhozo endaweni yesinyibilikisi esigcina isithuba, ngelixa indawo yokugcina efunekayo enikezelwa ziikhabhathi ezingaphambi kwekhawuntari inokujongwa kwikhabhathi yamayeza okanye uvule ishelfu endaweni yoko.
Enye yeendlela ezibaluleke kakhulu zokugcina uyilo lokuhlambela oluncinci lukhangeleka lukhulu kukusetyenziswa kombala. Imibala yeendonga zokukhanya ibonisa ukukhanya ngakumbi kwisithuba. Ukuba ufuna ukongeza umbala omnyama gcina uqulethwe kwimigangatho yeziphumo ezilungileyo. Bona Okuninzi zoyilo ezimhlophe Apha.
Ezinye zeengcamango ezincinci zokuhlambela zivela kwiimfuneko. Kanye ngaphandle kwendawo ebiyelweyo yokuhlambela, ishelufu evulekileyo yenziwe ngebhlokhi yomthi kunye nemibhobho yobhedu endala efakwe eludongeni. Usebenzisa iintlobo zethayile zamatye angwevu, orenji kunye namdaka, le ndawo yeshawari yenziwa ukuba ijongeke kancinane kunokuba injalo ngefestile enkulu yemifanekiso ekuphakameni kwentloko, kunye nokusetyenziswa kweethayile ezincinci zemayile.
Le ndawo yokuhlambela ngamatye i-rustic ifaka iitayile ezimnyama ezenziwe ngombala kunye nokukhanya okulula kweendonga, kunye neethayile ezimnyama ezisetyenziselwa ukugxininisa ezishelifini, udonga lwangasemva kunye nesakhelo sesipili. Sebenzisa umgangatho omnyama ngokudibeneyo nodonga olukhanyayo kugxininisa indawo ethe kratya, ngakumbi ukuba idityaniswe nefestile enkulu yomfanekiso. Isinki ngokwayo inezishelufu ezinamatye anzima asebenza njengenkxaso yesinki enzima kunye nekhawuntara. Itanki yendlu yangasese ibethelelwe ngaphakathi esakhiweni esisetyenziswa njenge shelufu, kwaye enye ishelfu yenziwe ngaphezulu ukuyigcina ngakumbi.
Le ndlu yokuhlambela isebenzisa iithayile ezimdaka ngombala ezidityaniswe ngetayile efanayo enemibala kwimigca ebhityileyo yeendawo ezigxininisayo ezinje ngetafile yokugcoba nasemva kweeshelfu zeglasi ezivulekileyo. Imigca ethe tyaba inika umbono ongekhoyo wezithuba ezibanzi, kwaye oko kuyandiswa ngakumbi kukusetyenziswa kwezibuko kwiindonga ezintathu ezijikeleziweyo zetheyibhile yelavatory.
Idropha yokuwa, kunye nezibane ezifakwe phantsi, iphinda iqaqambe indawo. Ukusuka esipilini, kuyabonakala ukuba indlu yangasese inetanki egungxulweyo eludongeni, inika isihlalo sendlu yangasese kunye nesitya ngakumbi kwigumbi. Ndwendwela eli phepha ngaphezulu Izimvo zangasese zezithuba ezincinci .
Master Plumber PS2095 Roller yePhepha yangasese, emhlophe $ 4.49 umthengisi ogqibelele Izimvo eziyi-1086 UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
I-Ondine 16 Inch Pedestal Sink - Icwecwe Whi… $ 249.95 umthengisi ogqibelele (133) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
I-Bianco Carrara iMarble emhlophe eKhazimlisiweyo ... Iidola ezingama-54.50 umthengisi ogqibelele (4) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Iphepha-mvume lokuCoca elinciphayo eliseDongeni, Vint… $ 28.99 umthengisi ogqibelele Izimvo eziyi-1266 UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Stainless engena Pebble F ... $ 18.99 umthengisi ogqibelele (4) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
IZiko leLitye kwi-Intanethi uCarrara White Mar… $ 15.95 umthengisi ogqibelele (16) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Imibono yezipho zekrisimesi yomolokazana
IZiko leLitye kwi-Intanethi uCarrara White Mar… $ 15.95 umthengisi ogqibelele (9) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
UKate noLaurel Calter Fra yokuhombisa yale mihla… $ 89.99 umthengisi ogqibelele Izimvo eziyi-344 UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA Iintengiso zeAmazon
jjhouse umama womtshakazi
iinwele ezimnandi zomtshato ngeenwele ezimfutshane